Kumile ukufunda esikoleni abafundi befuna kubuyiswe uthisha wabo | News24
Kumile ukufunda esikoleni abafundi befuna kubuyiswe uthisha wabo
Johannesburg - Abafundi besikole samabanga aphezulu e-Eastern Cape badube ukufunda njengoba befuna kubuyiswe uthisha wabo owahanjiswa kwesinye isikole.
La bafundi besikole iNgqaqini Junior Secondary, eWillowvale sekuphele amasonto amabili bedube ukufunda ngoba befuna kubuye uthisha wabo uNonkoliseko Makabane.
UMkabane wakhishwa kulesi sikole ngoba umnyango wezemfundo uthi baningi kakhulu othisha kulesi sikole. Abazali babafundi bathi lo thisha wafika nezinguquko ezinomthelela omuhle kusukela ngo-2008 efika.
USihlalo webhodi elingamele isikole uNkciyo Lumnkile, uthe batshela uthishanhloko ukuthi kwakufanele batshelwe ngodaba.
"Uthishanhloko wasitshela ukuthi kunabantu abathile ababhekana nezimo ezifana nalezi," usho njalo.
"UMkabane wadlala indima enkulu esikoleni."
UMalibongwe Mtima okhumela umnyango wezemfundio ezifundazweni uthe:" Abazali ababi yingxenye yalolu daba.
"Uthishanhloko nguye oqale abheke ukuthi ngabe umuntu uyafuna yini ukushiya esikoleni. Uma engekho ofuna ukuhamba, udaba lube selubheka ukuthi wafika nini esikoleni. Sizophenya ukuthi ngabe kwalandelwa inqubo efanele yini."